Maqaallada Dhruv Mehta ee Martech Zone |
Maqaallada by Dhruv Mehta
Dhruv Mehta waa Xirfadle Suuqgeyn Digital ah wuxuuna ku siiyaa xalal xilligii dhijitaalka ahaa. Waqtigiisa firaaqada, wuxuu jecel yahay inuu wax ku qoro tiknoolajiyada iyo suuqgeynta. Wuxuu si joogta ah ugu darsadaa Tweak Your Biz.
Jimcaha, Agoosto 7, 2020 Jimcaha, Agoosto 7, 2020 Dhruv Mehta
Macaamiilku waa halbowlaha ganacsi kasta. Hase yeeshe, dhowr shirkadood oo keliya ayaa la socon kara dalabkooda isbeddelaya, iyagoo ka tagaya daaqad weyn oo fursad ah shirkadaha diyaar u ah inay maal gashadaan waayo-aragnimada macaamiisha iyo inay horumariyaan qaybtooda suuqa. Si la yaab leh maahan, maaraynta CX waxay u muuqatay mudnaanta koowaad ee hoggaamiyeyaasha ganacsiyada kuwaas oo dhigaya qaddar sii kordheysa oo ilo ah si loo helo. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan la helin tiknoolajiyad sax ah, suurtagal maaha in la gaaro